Psychology - iBezzia | IBezzia
Enye yezona zinto zibaluleke kakhulu ukuba ibe ngu umfazi owomeleleyo kwaye kuyazimela isayikholojisti okanye amandla obuntu kunye nesazisi esinokuqhayisa. Kungenxa yoko le nto eBezzia, sifuna ukunceda bonke abantu basetyhini ukuba bazithande, bomelele kwaye benze izigqibo.
Yiyo loo nto kweli candelo sifuna ukukunceda ngengcebiso malunga nendlela yokujongana nengxaki, indlela yokunxibelelana nabahlobo bethu, iqabane okanye usapho okanye sikuxelele izitshixo zokuba ngabantu abanezinto ezicacileyo.
Nangona singezizo izazi ngengqondo, sinazo izimvo malunga nalo mbandela kwaye singakunika iingcebiso eziza kukunceda uphucule imiba yangaphakathi yendlela yakho. Siyathemba ukuba bayakunceda.
Ixhala noxinzelelo, yintoni umahluko?
por USusana godoy yenzayo Usuku olu-1 .
Ukuxhalaba kunye noxinzelelo kuhamba kunye nemihla yethu yemihla ngemihla. Kuba bobabini bahlala bekhona kwaye simamele intetho ...
Iindlela zokunciphisa uxinzelelo
Andiqinisekanga ngendlela yokunciphisa uxinzelelo? Ewe ayisiyonto ilula ukuyenza kodwa iyenza ...
Ukufezeka akukho, nokuba sizama ukukufumana ngazo zonke iindlela. Kodwa kukho umntu ogqibeleleyo kwaye oku ...
Ungamnceda njani umntu onoxinzelelo
Ukunceda umntu onesifo sokudakumba akukho lula. Kodwa xa sisondele kakhulu, akunakuphepheka ukucinga ...
Umqhubi Womsindo: Yintoni kwaye uyilawule njani?
Njengoko igama libonisa, sithetha ngomzuzu obaluleke kakhulu kunye noxinzelelo oluphezulu oluhlala ...
Ukuzithoba: Kutheni sizithoba?
Ukuzithoba yenye yezo mvakalelo zibekho kakhulu kunokuba sicinga, ngelishwa. Nangona ihlazo ...
Ungayenza njani into yokuba iqabane lakho likusola ngayo yonke into
por UMaria Jose Roldan yenzayo Iinyanga ze2 .
Ukugxeka iqabane lakho ngalo lonke ixesha ngayo nantoni na oyenzayo luphawu olucacileyo lokuba into ayikho ...
Ukungcungcuthekiswa ngokweemvakalelo kwesi sibini kuyinto eqhelekileyo kwaye ixhaphakile kunokuba abantu becinga. Ndiyazi…
Ukuhlala nomntu onengxaki yokuphazamiseka engqondweni yinto enzima ngokwenene, ngakumbi ukuba liqabane lakho. Ayiyo…
por USusana godoy yenzayo Iinyanga ze2 .
Abantu abangathembekiyo banoluvo lokuba abanakuthemba mntu, okanye phantse nabani na. Sithetha nge ...
Ungasinceda njani esi sibini silawule iimvakalelo zaso
por UMaria Jose Roldan yenzayo Iinyanga ze3 .
Ngamnye kufuneka abe noxanduva lokukwazi ukulawula iimvakalelo zabo kwaye ubabonise indlela abavakalelwa ngayo. Kwindaba ye…